किनमेलका लागि एक घर एक पासको व्यवस्था गरौं,गगन थापाको यो प्र,स्ताब कस्तो लाग्यो ?
काठमाडौं -: नेपाली कां,ग्रेसका नेता गगन थापाले निश्चित समय तो,केर किनमेल गर्न समय उपलब्ध गराउनु अ!व्यवहारिक र जो!खिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। सरकारले गरेको वर्तमान व्यवस्थाले झनै किनमेलका लागि भि,डभाड बढ्ने उनको त,र्क छ। ‘थोरै समय पसल खुल्न दिने र धेरै परिवारका मान्छे एकैपटक पसलमा सामान किन्न जानुपर्ने बा!ध्यता भएपछि त्यो समयमा झन् धेरै भि,डभाड हुनु स्वभाविक हो’ थापाले भने।
को’रोना सं!कट व्यवस्थापन समितिका सं,योजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आ!ग्रह गर्दै थापाले ‘एक घर एक पास’को व्यवस्था गर्न सु,झाए। खाद्यान्न लगायत अ!त्यावश्यक सामानका पसल निश्चित् समय खोल्न दिने प्रबन्धलाई परिवर्तन गर्न उनले सुझाए का छन्। खाद्यान्न र अ!त्यावश्यक पसल बिहान ६ बजेबाट साँझ ८ बजेसम्म खोल्नेगरी व्यवस्था मिलाउन उनले आ!ग्रह गरे। सामान खरिदका लागि एक प्रत्येक परिवारलाई एउटा पासको व्यवस्था गर्दा भिडभाड ह,ट्ने उनले बताए।
भि,डभाड ह!टाउन नेता थापाले सरकारलाई दिएको सु!झाव : को’रोना भाइरसको सं!क्रमण थप फैलिन नदिनको लागि यतिवेला विभिन्न स्थानमा नि,षेधाज्ञा छ। अर्थात् अ,त्यावश्यक र तोकिएका काम बाहेक हिंडडुल गर्न, घरबाट निस्कन नि!षेधित छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भिडभाड नहोस्,एक घर परिवारको अर्को घर परिवारसँग भेट नहोस् जसले गर्दा कोही सं!क्रमित रहेछ भने पनि अ,न्यलाई सर्न नपाओस् भन्ने नै हो।’अर्को तर्फ सरकारले नै अत्यावश्यक सामान खरीदको लागि बिहान निश्चित् समयसम्म पसल खोल्न दिने र सामान किन्न दिनेगरी व्यवस्था गरेको छ। यसरी थोरै समय पसल खुल्न दिने र धेरै परिवारका मान्छे एकैपटक पसलमा सामान किन्न जानुपर्ने बा,ध्यता भएपछि त्यो समयमा झन धेरै भिडभाड हुनु स्वभाविक हो।
यसो गर्दा नि,षेधाज्ञा लगाएर जस्को बिचमा भेट!घाट नहोस्, सम्प,र्क नहोस्, भि,डभाड नहोस भनेको हो, यो व्यवस्थाले त झन सरकारले खोजेरै भेट!घाटससम्प,र्क गराएको जस्तो भएन र ? त्यसैले यसरी निश्चित समय तोकेर किनमेल गर्न दिने कुरा अव्यवहारिक र जो!खिमपूर्ण छ।अर्कोतर्फ घरमै बसेर अ,र्डर गरेर सामान मगाउन सकिने होम डेलिभरी सेवा उपलब्ध थियो।यस सेवाबाट सामान किन्दा अलिकति ध्यान पुर्याउने हो भने त घर सम्म सामान ल्याईदिने संग त भेटघाट नै हुदैन।’बिना सम्पर्क सामान किन्न सकिने अवस्था थियो। नि,षेधा ज्ञाको बेला यो त झन उपयुक्त हुनुपर्ने हो, यसलाई व्यवस्थित गर्दै बिस्तार गर्नुपर्नेमा किन हो प्रशासनले यस्तो जोखिमको अवस्थामा यसको महत्व बुझ्न सकेन। यो दुई प्रवन्ध ले के देखाउँछ भने ,हाम्रो काम सुझबुझपूर्ण ढ!ङ्गले भइरहेको छैन। जुन कारणले नि,षेधाज्ञा जारी भएको छ त्यसलाई उ,ल्लङघन हुनेगरी निर्णय गरिरहेका छौं। त्यसैले यो सन्दर्भमा तल उल्लेखित दुई कुरामा ध्या!न दिन आवश्यक रहेको छ।
१) खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामानका पसल निश्चित् समय खोल्न दिने प्रवन्धलाई परिवर्तन गरी यस्तो पसल बिहान ६ बजेबाट साँझ ८ बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गरौं। प्रत्येक घर(परिवारलाई एउटा पासको व्यवस्था गरौं। पास लिएर आउनेले कुनै पनि समय मा तो,किएको क्षेत्र भित्र को पसल जान पाउने प्रबन्ध गरौं।’पास भएको व्यक्ति मात्र घर बाहिर निस्कन पाउने भएकाले एकपटकमा एक घरपरिवारबाट एकजना मात्रै बाहिर निस्कन सक्छ जसले पसलमा एकैपटक भि,डभाड हुन पाउदैन। टोलको जनसंख्या हेरेर, धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रको हकमा बार अनुसार छुट्टै पासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी व्यवस्था गर्दा भिडभाड नहुने भएकेले पसलमा अनिवार्य २ मिटरको सुरक्षित दुरी पनि कायम राख्न सकिन्छ र ग्रा!हकको आवश्यक रेकर्ड पनि राख्न सकिन्छ।
२) काठमाडौँ उपत्यकामा होम डेलिभरीलाई व्यवस्थापन गर्न मापद!ण्ड बनाउने समिति बनेको छ । यो समितिले मा’पदण्ड बनाउदा होम डेलिभरी सेवालाई सं,कुचित बनाउने नभई व्यवस्थित बनाउने सोच राख्नुपर्छ। अनलाईन मार्फत कारोबार गरिरहेका व्यवसायीको हकमास ई (क,मर्श र होम डेलिभरी संचालन गर्ने भनि अनुमति पाएमा कम्पनिहरुले के कस्ता सामान डेलि भरी गर्छन, जनशक्ति कति छ, सवारी साधन कति छन्, कसरी सेवा दिन चाहेको हो सबै जानकारी स्थानीय प्रशासनमा गराउने व्यवस्था गरौं ।
अहिलेको लागि होम डेलिभरीको लागी सञ्चानल गर्ने सवारी साधन र जनशक्तिको संख्या तोकौं अनि कम्पनीको कार्यालय (जहाँबाट सामान लोड गरिन्छ) त्यहाँपनि सबैले स्वास्थ सुर!क्षाको मापद’ण्ड अनिवार्य अपनाउने र जुन घरमा सामान डेलिभरी गरिन्छ त्यो ठाँउमा उपभो क्तासंग पनि सु!रक्षित दुरी कायम गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था बनाउँ। संभव भएसम्म सम्पर्कमा नै नहुने कुरालाई प्रोत्साहान गरौं’।
यसरी कारोबार गर्दा होम डेलिभरी गर्ने व्यवसाय संग हामी डराउनु पर्दैन। यसबाट त मान्छे घर बाट निस्कने संभावना झन् कम हुन्छ जसले नि,षेधाज्ञा लगाउनुको अर्थ साबित गर्छ जुन हामीले चाहेका हौं।त्यसैले, को’रोना सं,कट व्यवस्थापन समितिलाई मेरो आग्रह छ,स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरेर एक घर एक पासको व्यवस्था गर्न लगाउनुस ,साथै होम डेलिभरी सेवालाई थप स,तर्कता साथ नि,र्वाध संचालन गर्ने व्यवस्था गरेर नि,षेधाज्ञाको अवधिमा व्यक्ति(व्यक्ति बिच अनावश्यक सम्पर्क बिना नै सामान किनमेल गर्ने अवस्था बनाउन लगाउनुस’।